औषधि बेच्दा अब अनलाइनमा विवरण राख्नुपर्ने
काठमाडौं – सरकारले औषधिको विक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि औषधिको बिक्री–वितरण गर्दा चिकित्सकको नाम, प्र्रेस्क्रिप्सनअनुसारको औषधि र काउन्सिल नम्बर अनलाइनमा अनिवार्य अपडेट गर्नुपर्नेछ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
वाइडबडी एयरबस अनियमितताः बहालवाला मन्त्रीसहित दुई पूर्वमन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस
काठमाडौं – नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी एयरबस प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको छ । मंगलबार राति ११ बजेसम्म बसेको उपसमितिको बैठकले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ । त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री र खरिद प्रक्रियामा संलग्न सचिवहरुलाई कारबाही सिफारिस […]
खै स्वचालित भाडादर ?
कुलचन्द्र विष्ट । काठमाडौं । ईन्धनमा भएको मुल्यवृद्धिलाई मुख्य मुद्धा वनाएर सार्वजनिक यातायातको भाडाँ वृद्धि गर्न सधै तयार हुने यातायात व्यवसायी मुल्य घट्दा भने मौन बस्दै आएका छन । अन्तराष्ट्रिय वजारमा ईन्धनको मुल्यमा गिरावटसंगै त्यस्को असर नेपाली ईन्धन बजारमा पनि परेको छ । तर स्वचालित भाडाँदर लागु भएको वताईए पनि सवारी भाडाँ घटाउन न सरकार […]
लोप हुंदै लाखे नाच
सोनी शाही । काठमाडौं । विशेषगरि नेवार समुदायको धार्मिक तथा सास्ंकृतिक गौरवको पर्याय मानिंदै आएको लाखे नाच प्रति युवापुस्ताको आकर्षण कम हुंदै गएको छ । विशेषगरि लाखे नाचको सुरुवात कहिलेदेखि भयो र यसको ऐतीहासीक तथा धार्मिक महत्व के छ भन्ने बिषयमा पर्याप्त अध्यन समेत हुन सकेको छैन । तर पनि धर्म, परम्परा र संस्कृतिका हिसावले […]
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत
काठमाडौँ । प्रतिनिधीसभाबाट “कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५” बहुमतले स्वीकृत भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधीसभाको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सभामा पेश गर्नुभएको सो अध्यादेशलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा सांसद गगनकुमार थापाले सो अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकमा सांसद थापाले विधिशास्त्रीय ढङ्गले “कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५” सङ्घीयता […]
के सडक पेटीमा खान हुन्छ!
सरस्वती बस्नेत । काठमाडौं–पछिल्लो समय सडक पेटीमा पाइने परिकारमा धेरैको आर्कषण बढ्दो छ । खासगरी शहरी क्षेत्रमा केन्द्रीत यस्तो व्यापारबाट व्यापारीलाई फाइदा भएपनि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव गर्ने गरेको छ । अझ पछिल्लो समय त यस्ता खानेकुरा प्रति धेरैको आर्कषण पनि बढ्दो छ । सस्तो र छिटो खान पाइने यस्ता खाद्य समाग्रीको प्रयोग काठमाडौं उपत्यकामा […]
तपस्वी बमजन विवाद प्रकरण
जीतलाल श्रेष्ठ । बारा–आफुलाई बुद्धको अवतारको रुपमा ब्याख्या गर्ने रामवहादुर बमजन चौतर्फी विवादमा फसेका छन । अनुयायीहरुलाई यौन दुव्र्यवहार गरेकोदेखि कतिपयलाई बेपत्ता बनाएकोसम्म आरोप लागेपछि प्रहरीले उनलाई खोजि सुरु गरेको विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन । २०६२ जेठ २ गते बाराको रतनपुरस्थित अनाकन्टर बनमा पिपलको बोटमुनी ध्यान गरिरहेको अवस्थामा भेटिएपछि एकाएक चर्चामा आएका रामबहादुर बमजन यतिबेला विवादको […]
टोपी दिवस मनाईयो
काठमाडौ । मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस मनाईएको छ । नेपाली टोपीको प्रवद्र्धन गर्नका लागि अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन पारेर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । दिवसका अवसरमा स्वतन्त्र राष्ट्रप्रेमी अभियान नेपाल, जागरुक युवा अभियान नेपाल, गुन्यूचोली राष्ट्रिय जागरण नेपाललगायतका संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा टोपी दिवसको कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् । उनीहरुले आज […]
चाेलेन्द्रशमशेर प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्यो, संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेको छ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जबराको सपथ भोली हुनेछ । चार वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा रहने जबराविरुद्ध प्राप्त उजुरीबारे आजै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले उनीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलको क्रममा जबराले आफू प्रधानन्यायाधीश बनेमा अनुहार […]